"आनन्द -, जीवन परिस्थिति को एक निश्चित पक्ष मा प्राण को उडान छ" - उहाँले यस्तो लेखे
आनन्द - एक जादुई र अज्ञात विज्ञान घटना। यसको अस्तित्व प्रसिद्ध छ, तर केही एक सटीक जवाफ दिन सक्छन्, आनन्द के हो र यसको मुख्य घटक के हुन्। सायद दुविधा कारण यो कुरा प्रत्येक व्यक्ति को लागि फरक छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। अनुसार जीवन यसको मान संग, मान्छे आफ्नै समझ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, एक धनी मानिस आफूलाई धेरै किनभने नजिक साँचो मित्र को कमी को दुखी, तर गरिब, धन धनी मानिस ईर्ष्या हुनेछ विचार गर्न सक्छन् विपरीत।
यो विश्वास वा
त्यहाँ मानिसहरू हुन् भाग्य वा विश्वास विश्वास नगर्ने, तर तिनीहरूले मात्र एक क्षण रहन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर पृथ्वीमा happiest व्यक्ति को हो? या मान्छे को सम्पूर्ण समूह?
त्यहाँ जो यो खुशी को एक पल मात्र हो कि चाँडै अन्त्य को एक बानी छ भन्ने विश्वास ती छन्। तर सही छ जो, हामी पक्का लागि भन्न सक्दैन, र प्रत्येक व्यक्ति मुक्त उहाँले प्रसन्न रूपमा सोच्न छ किनभने यो आवश्यक छ भने पनि। र त्यहाँ पृथ्वीको happiest मान्छे हो कि, फोटो हामी देख्न सक्छौं?
Frane Selak - को happiest मानिस संसारमा
सूचीमा "पृथ्वीको happiest मान्छे," पहिलो स्थानमा क्रोएशिया बसोबास गर्ने Frano Selak छ। आनन्दित मानिसको शीर्षक उहाँले देशमा किनभने एक दिन उसलाई छोड्न भएन कि भाग्य को दिइएको थियो।
यो Frano7पटक यो रकम मा शाब्दिक थियो प्रत्येक मामला मा, मृत्यु बचा, तर केही सधैं उहाँलाई मदत कि बाहिर जान्छ। आफ्नो चमत्कारी भाग्ने को पहिलो 60s फिर्ता भयो। फ्रैंक यात्रा जो रेल, derailed र पानी अन्तर्गत बाँकी। को चिसो चिसो र स्थिति को त्रास भए तापनि उहाँले बाहिर प्राप्त र बचे बीच हुन सकें।
Frano Selak र खुसी उडान
केही वर्षपछि उहाँले नश्वर खतरा फेरि थियो। एउटा सानो पहाड को एक आरक्षित पुच्छर शीर्ष लैंडिंग गर्दा जो हाम्रो भाग्यशाली उडान थियो विमान। बलियो प्रभाव ढोका बाट खोलियो, र मात्र unfastened यात्री र एक उडान परिचर बाहिर उड्यो। बस Frano त विमान को रियर थियो जो बूथ कर्मियों, मा उनको पछि लागे, प्रेम खुला सधैं थियो, र एक राम्रो उडान परिचर देखेर उहाँले तिनलाई प्रेम गर्न छनौट गरे। तिनीहरूले जमिन माथि 600 मीटर को दूरी मा गिर, Frano सफलतापूर्वक उहाँलाई जीवित राखिएको भन्ने ठूलो हिउँ मा उतरा।
सहमत, कथा थप एक विज्ञान कल्पना चलचित्र षड्यन्त्र जस्तै किनभने वास्तविक जीवनमा यस्तो भाग्य - धेरै दुर्लभ। केटी पनि, भाग्न, त्यो रूख शाखामा समातियो व्यवस्थित। जोडी पहिलो बैठक पछि एक वर्ष विवाह गरे। यी दुई - पृथ्वीको happiest मान्छे। तिनीहरूले मात्र चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा सुरक्षित, तर अविश्वसनीय परिस्थिति संग प्रेम फेला परेन।
आफ्नो जीवन भर Frano कौशलतासाथ मृत्यु बचा र भाग्य को एक वास्तविक रोजाइको रूपमा, पनि लटरी एक लाख डलर जित्यो। जीत उहाँले मन्दिर, को भर्जिन मरियम र यात्रा को मण्डप को निर्माण को पुनर्निर्माण मा बिताए। कागज को एक सरल टुक्रा आवश्यक छैन उनको उमेर मा बैंक राख्न हो भनेर व्याख्या, बस मित्रहरुलाई बाहिर हस्तान्तरण रहनेछ। राम्रो तिनीहरूलाई अधिकतम खुशी र पछुताउनु गर्न केही प्राप्त।
एक तरिका रूपमा मनन खुसी हुन
"पृथ्वीको happiest मान्छे" को सूचीमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ, र मनन गर्न आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने र अर्को मानिस, 66 वर्षीया भिक्षु को दलाइ लामा लगभग गर्न थाले। उहाँले दैनिक मनन उहाँलाई खुसी भनेर तर्क छ। यो कथन धेरै रुचि विद्वान छ, र तिनीहरूले व्यक्तिगत यो यति छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने निर्णय गरे।
मस्तिष्क स्क्यानहरू Matthieu Ricard 256 सेन्सर उनको टाउको संलग्न को मद्दतले भिक्षु गरेको मनन को समयमा सञ्चालन गरिएको थियो। अध्ययन, यो बायाँ भनेर फेला परेन prefrontal Cortex मस्तिष्क को प्रार्थना पढ्ने समयमा गतिविधि छ। यो क्षेत्र को सक्रियता भिक्षु आनन्द र आनन्द को एक अर्थमा दिन्छ छ। Matthieu Ricard वास्तवमा happiest धेरै दशकसम्म अभ्यास गरिएको छ जो मनन गर्दा पृथ्वीमा व्यक्ति छ।
पृथ्वीको happiest मान्छे
यी दुई साँच्चै अचम्मको र असामान्य को इतिहास। आफूलाई तिनीहरूले पक्कै पनि भाग्यमानी महसुस, तर "पृथ्वीको happiest मान्छे" को शीर्षक पहिले नै संवाददाता र आफ्नो लेख मा आफ्नो कथा वर्णन गरेका पत्रकार तिनीहरूलाई दिइएको छ।
तर यो निर्धक्क asserts दानियल इभरेट्ट मात्र छैन व्यक्तिहरूलाई खुसी हुन सक्छ। 30 वर्ष, उहाँले एक भारतीय कुलको चाडहरूमा घेरिएको बस्थे। असामान्य बीचमा कुल निवास समय, कुलका अन्य मानिसहरू मन, त्यो निष्कर्षमा आए कि यी निवासी - पृथ्वीको happiest मान्छे। इभरेट्ट पूर्ण उनको राय, परिवर्तन परमेश्वरको renounced र नयाँ जीवन सुरु भयो।
नाम परिवर्तन र ताजा खाना
मान्छे जनजाति चाडहरूमा संसारको एक अद्वितीय दृश्य विनियोजन छन्। पहिले, तिनीहरूले धेरै नै विनम्र छन्। आफ्नो lexicon मा "धन्यवाद" जस्तै कुनै शब्द हो, "कृपया", र यति मा। डी तिनीहरू सुत्दा तपाईं आफैलाई गुमाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई विश्वास किनभने लामो समय को लागि सुत्न डराउँछन्। र अक्सर आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। सामान्यतया जीवनकालमा 5-6 पटक, हरेक नाम एक विशेष उमेर अवधि उल्लेख गर्न सक्छन्।
तिनीहरूले भोलि सोच्न छैन, लेखकको यो वास्तवमा द्वारा धेरै छक्क थियो। अन्य जाति, छैन जस्तै जंगल मा संकलित छन् जो समातिए माछा र फल, रूपमा ताजा खाना खाने को एक तयार आपूर्ति विपरीत। तिनीहरूको मन मा कुनै एकल भगवान छ, तिनीहरूले मात्र आफ्नो वन बस्ने भूत मा विश्वास गर्छन्।
चिन्ता बिना आनन्द
कुलको मा सम्पूर्ण रहन को लागि दानियल इभरेट्ट यी मानिसहरू स्वतन्त्रित र खुसी थिए भनेर थाह थियो। जीवन समस्या को पूर्ण छैन, सबै दिन तिनीहरूले खानाको आनन्द लिई र आफ्नो असामान्य नृत्य नाच, आगो मा खर्च। आफ्नो अनुहार मा आफ्नो मुख्य भावना एक आनन्द छ, र हास्य घडी वरिपरि सुने छ।
तर वास्तवमा पृथ्वीको happiest मान्छे - कुलको चाडहरूमा अर्को महादेशमा गएर बाँच्न सक्छ गर्नेहरूलाई? छैन निस्सन्देह, किनभने दानियल इभरेट्ट साथै Matthieu Ricard, बस आनन्द उहाँलाई लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा मा फेला परेन।
आनन्द को घटक
पृथ्वीको happiest व्यक्ति को हो? त्यहाँ आनन्दको एक साधारण स्वीकार Canon छ, उहाँले खुसी हुन सक्छ जो एक व्यक्ति को कोर मान यहाँ समावेश:
एक सफल क्यारियर;
happiest देशहरूमा दर्जा
मात्र मान्छे र परिवार खुसी हुन सक्छ। यहाँ happiest मानिसहरू हुन् पृथ्वीमा (देश मूल्यांकन)
त्यहाँ जनसंख्याको आर्थिक स्थिरता र सान्त्वना एक उपाय हो। साथै सुरक्षा र राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ। यी देशहरूमा तेस्रो विश्व देखि आप्रवासी को सबै भन्दा ठूलो प्रवाह मिलती मा छ। समस्याग्रस्त देशका शरणार्थी मर्यादा संग सूची बाँच्न सुनको मौका यस हेर्नुहोस्।
रूस नौ "भाग्यशाली देश" मा समावेश गरिएको छैन। पहिले, किनभने हाल को वर्ष मा कम जनसंख्याको बीचमा तह को जीवित र दोश्रो को, किनभने सांस्कृतिक विफलता को मानक को।
सामान्य, सबैका लागि आनन्दमा - यो कुरा फरक छ। केही मानिसहरू के सानो सन्तुष्ट छन्। अरूलाई धेरै लाभ छ, तर तिनीहरूले नयाँ र असामान्य कुरा स्थिर खोजीमा भएकोले तिनीहरूले तिनीहरूलाई आनन्द सक्दैन। खुसी मान्छे धेरै, तिनीहरूलाई प्रत्येक को इतिहास कुरा प्राप्त छैन। हामी सबै यो सूची मा प्राप्त गर्ने मौका छ, यो सिर्फ आफ्नै आनन्दित गर्न आवश्यक!
Stalkers - तिनीहरू को हुन्? शब्द "Stalker" र यसको घटना को इतिहास
Premenstrual सिंड्रोम - यो के हो? पीएमएस: लक्षण, उपचार
नरक आगो, वा नरक के हो?
अभिनेत्री Luiz Burguan: जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
को जीव गर्न पालुङ्गो व्यञ्जनहरु र फाइदाको।
औषधि "Belosalik": एक निर्देशन वर्णन, analogs